ब्युटी प्रोडक्ट उपयोग गर्ने सही तरिका
व्यस्त तथा कामकाजी महिला छिटो र सरल तरिकाले मेकअप गर्न रुचाउँछन् । यस्तो अवस्थामा मेकअप प्रोडक्ट सही तरिकाले प्रयोग नगर्दा अनुहार भद्दा तथा अनाकर्षक देखिन सक्छ । ...
स्पा लिन चाहनु हुन्छ ? ब्लड ग्रुप अनुसारको लिनुस्
यदि तपाईँलाई पार्लर गएर मसाज गराउन र स्पा लिन मन पर्छ भने केही नयाँ कुरा थाहा पाउनुहोस् । समय सँगसँगै स्पा र मसाजको क्षेत्रमा पनि धेरै नै परिवर्तन आएको छ । अब नयाँ नयाँ स्पा ट्रिटमेन्ंट र मसाजको विकल्प तपाईँसँग छ । ...
डन्डीफोर आएर हैरान हुनुहुन्छ भने यसो गर्नुस्
सुन्दर मुहारलाई कुरुप बनाउने डन्डिफोरलाई सामान्य घरेलु उपायले पनि हटाउन सकिन्छ । त्यस्तै आज हामी तपाईलाई डन्डीफोरबाट छुटकारा दिलाउने केही घरेलु उपायबारे जानकारी गराउँदैछौं । ...
गर्मीमा अनुहारलाई सँधै चम्किलो राख्न अपनाउनुस् यि घरेलु उपाय !
गर्मी मौसममा अनुहारको चम्किलो पन बनाइ राख्नका लागि छालालाई नरम बनाइ राख्नु आवश्यक हुन्छ । जसका लागि छालालाई पोषणको आवश्यक्ता बढी हुन्छ । घरमै बनाइएको काक्रोको फेश प्याक, गोलभेँडाको रस, बेसार, बेसन, दही र कागतीको रसले बनाइएको फेस प्याक तपाईँको छालाको लागि सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । ...
कुुन रक्तसमूहलाई कस्तो मेकअप ?
सुन्दर मुहार बनाउने लालसामा अधिकांश व्यक्ति विभिन्न ब्युटी प्रोडक्ट प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको एउटै मान्यता रहने गर्छ कि विभिन्न प्रकारका क्रिम या उपचारले सौन्दर्यमा निखार ल्याउन सकिन्छ । आफ्नो स्किन टाइपअनुसार विभिन्न प्रकारका प्रोडक्ट पनि प्रयोग गरिन्छ । ...
धेरै पोलिस लगाउँदा कमजोर हुन सक्छ नङ...
महिला आफ्नो ड्रेसअपअनुसार कम्बिनेसन मिल्ने गरी गहना तथा मेकअप पनि गर्ने गर्छन् । यसरी ड्रेस, गहना तथा मेकअपको म्याचिङ कम्बिनेसनले जो–कोहीलाई पनि स्मार्ट तथा फेसनेबल देखाउँछ । पछिल्लो समय कलर कम्बिनेसन मिलाएर नेल आर्ट गर्ने ट्रेन्ड पनि निकै छाउन थालेको छ । ...
पातलो शरीरमा स्मार्ट देखिन...
स्मार्ट एन्ड ह्यान्डसम बन्ने चाहना हरेक युवामा हुन्छ । सो चाहना पूरा गर्न आजभोलि युवाहरू बजारमा निस्किएका विभिन्न डिजाइनका ड्रेसअपमा मात्र होइन, ह्यान्डसम पार्लर पनि धाउन थालेका छन् । ...
कुन रक्तसमूहलाई कस्तो मेकअप ?
सुन्दर मुहार बनाउने लालसामा अधिकांश व्यक्ति विभिन्न ब्युटि प्रोडकक्ट प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुको एउटै मान्यता हुने गर्छ कि विभिन्न प्रकारका क्रिम या उपचारले सौन्दर्यमा निखार ल्याउन सकिन्छ । ...
किन अनुहार चमकहिन बन्छ ? किन छाला रुखो हुन थाल्छ ? धेरैको मनमा यहि प्रश्न उब्जिन्छ । त्यही कारण अनुहारको हेरचाहमा बढी नै ध्यान दिन थाल्छन् । ...
फुस्रो छालाको स्याहार गर्ने तरिका
धेरैलाई लाग्छ, चिल्लो छाला भएका व्यक्तिहरूलाई धेरै प्रकारको समस्या निम्तिन्छ । तर, चिल्लो छाला भएकाजस्तै फुस्रो छालाले पनि पनि धेरै झन्झट निम्त्याउँछ । फुस्रो छालामा सबैभन्दा बढी समस्या नुहाउँदा देखापर्छ । ...